GGI Insurance Ready for Action
Tin Mg Oo/Myanmar Business Today Reports of men being trafficked and enslaved to work on shrimp-catching rafts in the Gulf of Mottama shocked the people of Myanmar. The exposé came after the family ofafinal-year university student who becameahuman trafficking victim rescued him without any help from...
English Text Below နည်းပညာအသိုင်းအဝိုင်းမှ နည်းပညာစွမ်းရည်များကို ဖော်ထုတ်ရန်၊ လူထုအခြေပြုလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများမှ တင်ပြသော မြန်မာပြည်သူများ၏ အခက်အခဲပြဿနာ စိန်ခေါ်ချက်များအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာအဖြေများကို ရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက် ဖန်တီးရာက Open Innovation Platform တစ်ခုဖြစ်သည့် ဒို့ဖန်တီးကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ Covid-19 ပြီးဆုံးသွားသည့်အချိန်တွင် နည်းပညာအသစ်ဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များ လိုအပ်သော ထုတ်ပြန်မှုများကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ယခု Platform ကို မိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒို့ဖန်တီး အစီအစဉ် အား GIZ၊ Prudential Myanmar၊ Friedrich Naumann Foundation ၊ Yoma Bank နှင့် HEKS/EPER တို့မှ ပါတနာများအဖြစ်ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပါတနာများမှ platform...
Despite the COVID-19's devastating impact on trade and economy, Myanmar's fishery sector is seemingly doing well, at least according to data released by the government. The Ministry of Commerce estimates that fishery export will generate over $1 billion this fiscal year. "The local aquaculture has increased, which in turn increase fishery...
Civil Aviation Department has announced that the domestic flight ban, which ended on November 15, has extended until November 30 amid rising COVID-19 cases in the country Myanmar has imposed the restrictions on domestic air travel since September 11 after locally transmitted COVID-19 cases soared starting from late August. The country...
A healthy marriage does not take each other for granted. Both associates are interested in the other's lifestyle and are happy to listen to their concerns. Withinahealthy relationship, each ukrainian bride partner is interested in the other's desired goals and choices. Each spouse does...